ပဥ္စသီလံ – The Only Way To Go!
Posted on April 25, 2012 November 22, 2019 by barnay
လူ့လောက ကြီးထဲမှာ .. နေနေရခိုက် .. ကျနော်တို့တတွေအတွက် တရားသော အမှု ၊ တရားသောအပြု ၊ တရားသော သဘောထားများ ရှိနေပါမှ .. စိတ်ထဲ သန့်ရှင်း အမှန်တကယ် ချမ်းသာခြင်းဆိုတာတွေ ပိုင်ဆိုင်မှာပါ .. ။ လူလို့ ခေါ်ဆိုခံထားရတဲ့ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ စွမ်းရည်ရှိကြပါတယ် .. အဲ့စွမ်းရည်ကတော့ ကောင်းမြတ်ခြင်း မကောင်းမြတ်ခြင်း ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပါပဲ .. ။ အဲ့ဒီ စွမ်းရည်ဟာ ထူးမြတ်ခြင်းပါ .. အဲ့ဒီလို ထူးမြတ်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခုလို လူ့ဘဝ ရလာခိုက် .. အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေကို သုံးပြီး နေပါမှ .. ကျနော်တို့ရဲ့ ဘဝတန်ဖိုးဆိုတာဟာ ကိန်းဂဏန်းများသဖွယ် တန်ဖိုးများဖြင့် ရှိနေပါလိမ့်မယ် .. ။
လူ့ပြည်မှာ ရောက်လာတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ မွေးဖွားကြီးပြင်း အိုမင်း သေကြေ ပျက်စီး သဘောတည်း ဆိုတဲ့ နိယာမ အောက်မှ ကိုယ်စီ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ ကပြ တင်ဆက် အချိန်တန် ကလကာပိတ် ပြီးဆုံးသွားကာ ထိုရလာတဲ့ဘဝ အပြီးသတ် သွားသည်ပေါ့ .. ။ ဘဝမှာ သူသူကိုကို ပါပဲ .. အမြင့်မြတ်ဆုံး တန်ဖိုးကြီးတွေ မရနိုင်တောင်မှ သင့်တင့်တဲ့ တန်းဝင် လူ့အဆင့်အတန်းမှီတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလေးတော့ ရချင်ကြသား . ။ ဒါပေမဲ့ ယခု လူအများစု ဖြစ်နေတာက .. အပြည့်တင်ထားတဲ့ ဖရဲသီးလှည်း တစ်စီးကို နေရာရွေ့နေရသလိုပါပဲ .. တစ်လုံးချင်းစီ ရွေ့လို့ နိုင်နင်းပါလျှက် လှည်းတစ်စီးလုံးကိုမှ ရွေ့ချင်သူတွေများနေတော့ .. အားရှိသမျှ တွန်းပေမဲ့ မရွေ့နိုင်ပဲ အချိန်ကုန်လူပန်း စိတ်မောကြီးပေါ့ . ။
အဲ့ဒီ ဥပမာလိုပါပဲ .. လူ့လောကတန်ဖိုးရှိတာများကို အတုံးအတစ်လိုက် ချက်ချင်းလုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး .. ဒီတော့ နည်းနည်းချင်းစီ နိုင်သမျှ တတ်သမျှ ရွေ့ယူရင်း တန်ဖိုးတွေ တဖြည်းဖြည်း မြှင့်ကြရမှာပါ .. ။ တကယ်တော့ ကျနော်အပါအဝင် ခုခေတ် လူငယ်တွေဟာ ဟိုအရင်ခေတ်က လူတွေထက် ပိုတော်ရရ မှာပါ .. ။ ဘာလို့လဲဆို အမှားတွေကို သူတို့ အရင် ဖြတ်သန်းပြီးခဲ့ပြီလေ .. ဖြတ်သန်းပြီးလို့ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကျနော်တို့အတွက် စာဖြင့် ဖြစ်စေ ၊ သင်္ကေတဖြင့် ဖြစ်စေ ၊ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ ချန်ထားခဲ့ကြပါတယ် .. ။ ကျနော်တို့ဟာ ထိုစာတွေမှ တဆင့် သူတို့ပေးထားခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကြိုတင်သိရှိ ခန့်မှန်းရင်း နောက်ထပ် ပိုအဆင့်မြင့်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ရပါမှ လူတော်တန်း ဝင်လာပါလိမ့်မယ် .. ။
ခေါင်းစဉ်မှာ ကျနော် ရေးထားတာက .. ပဥ္စသီလံ တဲ့ .. ဘာသဘောလဲ ဘယ်လိုအနက်လည်း ဖတ်မိသူများ ခွဲခြားတတ်ပါလိမ့်မယ် ..။ ခွဲခြားရာမှာလည်း စာဖတ်နည်းသူနဲ့ စာဖတ်ရင့်သူများအကြား အတွေးများ ကွဲပြားနေပါလိမ့်အုံးမယ် .. ။ တကယ်တော့ ပဥ္စ ( ငါးခု) သီလံ ( သီလ = အကျင့် ) ပေါ့ဗျာ .. ။ ငါးပါးသီလ လို့ ဆိုလိုချင်မိတာပါ ..။ ငါးပါးသီလ လို့ ကျနော် ပြောလို့ လူငယ်တွေများ .. တရားဘက်သဘောကြီးပါလို့ မမြင်စေချင်ပါ .. ။ ငါးပါးသီလ ဆိုတာက အဆင့်မြင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့် သိက္ခါ ပါပဲ .. ။ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအကျင့်ကို ထိန်းနိုင်ရပါမယ် .. ။ ဒါမှ လူဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော တန်ဖိုးရှိရှိ လူသား ဖြစ်လာမှာပါ ။ ( ပြောသာပြောရပါတယ် ထိန်းနိုင်သူ ရှားနေတဲ့ခေတ်ပါ ) ။
ခုခေတ် လူငယ်လေးများ ကို တော်တော် အားပေးချင်မိပါတယ် .. ။ လူကြီး လူလတ်များကိုတော့ ကိုယ့်ထက် တော်တတ် သူများအဖြစ် မှတ်ယူထားပါတယ် .. ။ ခု နောက်တက်လာမဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကလေးများဟာ .. တို့တိုင်းပြည်နဲ့ တို့လူမျိုး ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ကာ အနာဂတ် အတွက် ချိန်ထိုးခံရတဲ့ သူများပါ ။ သူတို့တွေမှာ ရှိသင့်တာက . စောစောလေးက ပြောတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ အကျင့်တွေပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ လူ့ဘဝမှာ အဲ့ဒါမရှိရင် အသက်မရှင်နိုင်ဘူးတဲ့လား ဆိုရင် ရှင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ .. သို့သော် စိတ်ထားမှာတော့ ညစ်နွမ်းနေမှာ သေချာပါပဲ .. ။ ဒီတော့ သေချာ စဉ်းစားပြီး ဒို့တတွေ လုပ်သင့် လား လိုက်နာသင့်လား ဝေခွဲကြပေါ့ .. ။ ဒါမှ လူမည်မှာ ။
ငါးပါးသော လူ့ကျင့်ဝတ်မှာ .. ( ၁) သူများ အသက်ကို သတ်ခြင်း ။ မလုပ်သင့်ပါဘူး သက်ရှိဆိုတာ သတ္တဝါတွေပါ .. တိရိစ္ဆာန်လည်း သက်ရှိ လူလည်း သက်ရှိ .. အားလုံး သော သက်ရှိတွေဟာ သတ္တဝါ တွေပါပဲ .. ။ ကျနော်တို့မှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်အနေနဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို တန်ဖိုးထားသလို သက်ရှိတိုင်းဟာလည်း သူတို့အသက်ကို တန်ဖိုးထားကြတာပါပဲ .. ။ ကိုယ်တွေမသေချင်သလို သူတို့တွေဟာလည်း မသေချင်ကြပါဘူး ။ ဒီတော့ သူများအသက်ကို မသတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အကျင့်ကလေး မွေးမြူသင့်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဟာ အဆင့်အတန်းရှိလူရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားရင်ပေါ့ … ။ မွေးမြူကြပါ ထိုအကျင့်ကို စောင့်ထိန်းကြပါ .. ကျနော်မှ အထူးတလည် လေးစားပါသည် ။
နံပါတ် ( ၂) အနေနဲ့ သူများပစ္စည်းဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း ။ ဒါကိုတော့ လူတိုင်းမကြိုက်တဲ့ အရာပဲ .. ။ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သူများ ခိုးတာ မခံချင်ကြဘူး ထို့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အများအလယ်မှာ သူခိုးဟု မထင်မြင်စေချင်ကြဘူး ။ သို့သော်လည်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာ လူတော်လူကောင်း ရှိသလို လူဆိုးလူညံ့လည်း ရှိတာမို့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခိုးတဲ့သူများ ရှိနေပြီး မကင်းနိုင်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ် ။ ခိုးခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုခိုးတာများလဲဟ လို့ မေးမယ်ဆိုရင် .. ။ သူများမသိအောင် လိုတာထက် ပိုပြီး အမြတ်ထုတ်ထားခြင်း .. အဲ့ဒါဟာ သူခိုးပဲ ။ တန်ရာတန်ကြေး ယူထားပြီး အလုပ်လုပ်ရာမှာ တန်ရာတန်ကြေး မလုပ်နိုင်သူများ ဟာလည်း သူခိုးပဲ ( ရေသာခိုခြင်းကို ဆိုလိုသည် ) ။ လူလိမ် တွေဟာလည်း သူခိုးပဲ ။ဟင် .. ဒါဆို သူခိုးချည်းပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့ လို့ ဆိုရင် ဟုတ်တယ် သူခိုးချည်းပဲ .. ။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သူခိုး မဖြစ်စေဖို့ အချက်ကလေးပါပဲ .. ။ ဒီတော့ အဆင့်အတန်းမြင့် လူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ထားတယ်မလား .. ဒါဆို ကိုယ် မရသင့်တာ သူများ မသိ ၊ ခွင့်မပြု ၊မကျေနပ် တာမျိုး မယူနဲ့ပေါ့ဗျာ .. ။ ဒါကိုလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ နှစ်ချက် လုံသွားပြန်ပြီ .. ။
နံပါတ် ( ၃) သူတပါး ကာမပိုင် သားမယားအား ပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်း ။ ဟယ် .. ဒါကတော ကင်းကြဘူးဟ လို့ ဆိုလေမလား .. ။ ကင်းသည်ဖြစ်စေ မကင်းသည်ဖြစ်စေ လူကတော့လူပါပဲ .. ။ ကာမ ဘုံမှာ နေနေရတဲ့ ဖြစ်လာရတဲ့ ကျနော်တို့တွေဟာ ဒီစိတ်ဘယ်ကင်းမလဲ .. သို့သော် စောင့်စည်းခြင်းတော့ လူမှာ ရှိသင့်တာပေါ့ဗျာ ။ လောကမှာ ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူ ခင်သူ ဘဝအဖော်တွေဆိုတာ မရှားပါဘူး ( ရှားတဲ့သူလည်း ရှိကောင်းရှိမပေါ့ 🙂 ) ဒါပေမဲ့ သင့်ရာ သင့်ရာ ရှိကြပါတယ် .. ။ ဒီတော့ ကိုယ့်နဲ့ နီးစပ်ရာ မှာ ဆက်ဆံနေကြရတဲ့ သူများ သားမယား လင်ယောက်ျား တွေကို မပြစ်မှားဖို့ လိုအပ်ပါသဗျာ .. ။ ဒါတော့ စောင့်စည်းကြပါ ။ လူပဲ လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ .. ။ ကိုယ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆင့်အတန်းရှိသတ်မှတ်ထားပြီးသားပဲ စောင့်စည်းပါ ။ အကယ်၍ စိတ်က အဲ့ဒီပစ်မှားတဲ့ဘက် ကိုယ်သတိမထားမိပဲ ယိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တောင် နောက်ပြန်ဆုတ်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးပါ .. ငါဟာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့သူဆိုတာကိုပေါ့ .. ။ ဟုတ်ပါတယ် သင်ဟာ အဆင်အတန်းရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ .. ။
နံပါတ် ( ၄ ) မုသားစကား ၊ မဟုတ်မမှန်သော စကား ။ ဒါကတော့ လူတိုင်းနည်းပါးမကင်းကြဘူးတဲ့ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်လည်း မကင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ . ကင်းအောင် ထိန်းသိမ်းနေပါတယ် မုသားသုံးဖို့ အခွင့်ကြုံလာရင်တောင် အထက်က ကျနော်ဆိုခဲ့သလိုပဲ ငါဟာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်လား ဆိုတာ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ် .. ။ တကယ်တော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြှင့်တင်ချင်မိတာပါပဲ ..။ အားလုံးလည်း ထို့အတူဖြစ်မှာပါ ။ မုသားမပါ လင်္ကာ မချော ဆိုတဲ့ စကားရှိပေမဲ့ ထိုစကားဟာ ပညာရှိစကား မဟုတ်လို့ မလိုက်နာသင့်ပါဘူး ။ မုသားသုံးလိုက်လို့ ဘာဖြစ်သွားမယ် ညာဖြစ်သွားမယ်ထက် စင်ကြယ်ခြင်းကို ၊ ဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်းကို ညစ်ထေးစေတာတော့ အမှန်ပါပဲ ။ အားလုံး မကင်းနိုင်ကြပေမဲ့ ကင်းသထက် ကင်းလာအောင် ၊ အကျင့်ထူရာကနေ ပါးလာအောင် ၊ ပါးရာကနေ လုံးဝမရှိသည့်တိုင်အောင် တဖြည်းဖြည်း ချဉ်းကပ် စောင့်စည်းကြစေလိုပါတယ် ။ ဒါမှသာ အများနှစ်သက်တဲ့ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
နံပါတ် ( ၅ ) သေရည်သေရက် သောက်စားမူးရစ်ခြင်း ။ ယောက်ျားများအားလုံးနီးပါ မကင်းတတ်ကြပါဘူး ။ ခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေပါ မကင်းတတ်သလို ဖြစ်လာပါတယ် ။ မူးရစ်စေသောအရာဟာ .. သောက်သူကို စိတ်ကျေနပ်သလိုလို ဖြစ်စေတတ်ပြီး .. စိတ်ရဲ ကိုယ်ရဲ ၊ အာရဲ လျှာရဲ ဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ် .. ။ သွေးဆူပြီး ဒေါသထွက်လွယ်တတ်ပါတယ် ။ မူးပြီး ကောင်းတဲ့စိတ် မကပ်တော့ပဲ မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ထိုသူအဖို့ အန္တရာယ်ပါပဲ ။ ဒီတော့ ထိန်းနိုင်သည်ဖြစ်စေ မထိန်းနိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှောင်ရှားစေလိုပါတယ် ။ . ရှောင်ရင်း ရှောင်ရင်းကနေ လုံးဝ ရှောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ခုခေတ်မှာ ပြောတတ်ကြတဲ့စကား အဲ့ဒီ သေရည် အရက် မသောက်လိုက်လို့ လူဖြစ်ရှုံးမသွားပါဘူး ( ဒီလိုပြောလို့ကန့်လန့်တိုက်တယ်မထင်စေချင်ဘူးဗျ .. ဘာလို့လဲဆို လူတွေက အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆို မှားမှားမှန်မှန် အများဘက်က ပုံအော ထောက်ခံတတ်ကြလို့ပါ ) ။ ကဲ ဒီတော့ နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ မူးရစ်စေတဲ့ အရာများ အား ရှောင်ကျဉ်ခြင်း ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ့်အလိုကျ နေနိုင်ပါတယ် ။ လိုက်နာမယ်ဆိုလည်း လိုက်နာနိုင်ပါတယ် .. ကိုယ်က အဆင့်အတန်းရှိ လူတစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လိုက်နာပြီး ထိန်းသိမ်းပေါ့ဗျာ .. ။ ဟုတ်ပါတယ် သင်ဟာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ .. ။
ပဥ္စသီလံ ဆိုတဲ့ အကျင့်ငါးခု သို့မဟုတ် အများသိထားတဲ့ ငါးပါးသီလ ဆိုတာကို တင်ပြပြီးပါပြီ .. ။ လိုက်နာရင် အကျိုးရှိမယ် မလိုက်နာရင် လည်း ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း ရမယ်ပေါ့ဗျာ .. ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က အခရာ ကျတာမို့ .. ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပေါ့ .. ။ ခုလိုခေတ်မှာ မွေးဖွားလာကြတဲ့ စာတတ်ပေတတ် ၊ စာဖတ်တတ် ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ လူငယ်များ .. အနေဖြင့် ပညာရှိများရဲ့ လေးစားခံရခြင်းကို မျက်ကွယ် မပြုမိပါစေနဲ့လို့ ပြောချင်မိပါတယ် .. ။ အဲ့ဒီ လူ့ကျင့်ဝတ် သီလ ကို စောင့်ထိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်း အန္တရယ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ကင်းလာပြီး စိတ်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ဖြူစင်လာပါလိမ့်မယ် ။ မိမိကို အများက နှစ်သက်လာသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း မိမိကိုယ်ကို နှစ်သက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒီတော့ ဘဝဟာ တိုးတက်လာသလို ပတ်ဝန်းကျင်မှတဆင့် အနာဂတ် နိုင်ငံဟာလည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို လူကောင်းများဖြင့် ၊ အဆင့်အတန်းရှိသော လူငယ်များဖြင့် ဖန်တီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအထိ မျှော်လင့်ရင်း .. သတိပေးသလိုတမျိုး .. စေတနာများဖြင့် တဖုံ … မိမိရော အားလုံးအတွက်ပါ ဗျို့ဟစ်လိုက်ရပါကြောင်း … မေတ္တာရှေ့ထား ရေးလိုက်ရပါသည် ။
၂၅ ၊ ဧပရယ် ၊ ၂၀၁၂
Posted in လူငယ်တိုးတက်ရေးTagged ငါးပါးသီလ
2 thoughts on “ပဥ္စသီလံ”
အကြပ္မဲ႕တဲ႕ၾကမ္းပရမ္းပတာလို႕ဆိုပါတယ္ ။ လူေလာကဆိုတဲ႕ၾကမ္းျပင္ႀကီးဟာလဲ ကိုယ္က်င္႕တရားဆိုတဲ႕ အကြပ္မဲ႕သြားမယ္ဆိုရင္ မေတြးရဲစရာပါ ။ ခုေခတ္မွာ လက္ရွိဘ၀ေျပဖို႕သာအဓိကဆိုၿပီး ကိုယ္က်င္႕တရားကိုပစ္ပယ္ထားတဲ႕အယူအဆေတြေပၚေနပါတယ္ ။ စီးပြါးေရးအဆင္ေျပဖို႕ အရက္ေသာက္တာအျပစ္မရွိ ။ သူမ်ားအိမ္ယာက ကိုယ္႕ကိုအလိုရွိလို႕ သူအိမ္ယာရဲ႕ အာသာဆႏၵကို ေျပေပ်ာက္သြားေစတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္႕မွာ အျပစ္မရွိ ။
ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတဲ႕အယူအဆပါပဲ ။ စကား၀ိုင္းတစ္ခုမွာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြေျပာျဖစ္ေတာ႕ တစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္ ။ မွန္သလိုလိုပဲတဲ႕ သူဆႏၵကို ျဖည္႕ဆည္းေပးရတာပဲတဲ႕ ။ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ေျပာလိုက္မိပါတယ္ ။ခင္မ်ား မိန္းမရဲ႕ဆႏၵကို တျခားတစ္ေယာက္က ျဖည္႕ဆည္းေပးရင္ေကာလို႕ ။ အဲ႕ဒီၾကမွ သူကေနာက္တာပါတဲ႕။
ငါးပါးသီလကို -ေလာကပါလ=ေလာကေစာင္႕တရားလို႕ဖတ္ဘူးပါတယ္ ။ ဒီေလာကေစာင္႕တရားမ်ားကို
တန္းဖို႕ထားခဲ႕ၾကတဲ႕ေခတ္အခါက ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက တံခါးမရွိတဲ႕ႏိုင္ငံပါ ။ ဟိုနားဒီနားသြားလို႕ ကိုယ္႕အိမ္
မွာ လူမရွိလို႕ တံခါးပိတ္ထားၿပီး ေသာ႕ခတ္ထားစရာမလိုေလာက္ေအာင္ ကိုယ္က်င္႕ေတြျမင္႕မားခဲ႕ၾကတဲ႕
ႏိုင္ငံပါ ။ ခုေခတ္မွာ ေျပာေနၾကပါတယ္ ငါတို႕လူမ်ဳိးေတြက ႏိုင္ငံႀကီးသားမပီသဘူးတဲ႕ ။ ဒီအေျပာမ်ဳိးၾကားရတိုင္း
ရင္နာမိပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူမ်ဳိး ကိုယ္႕က်င္႕ျမင္႕မားခဲ႕ခ်ိန္က အဲ႕ဒီႏိုင္ငံႀကီးသားဆိုတာေတြက ဘယ္လို
လူေတြလဲဆိုတာ ေလ႕လာသင္႕ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္႕အေဖက ေျပာဘူးတယ္ သူတို႕ငယ္ငယ္က တံငါလို႕အေျပာခံ
ရမွာေၾကာက္လို႕ တံငါမလုပ္ပဲ လယ္ကူလီပဲ လုပ္ခဲ႕ၾကတာ ခုေတာ႕ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေနရာလုရလို႕ ရန္ျဖစ္ေလာက္
ေအာင္ပဲ တံငါလုပ္သူေတြေပၚမ်ားေနၿပီတဲ႕ ။ အထက္ေဒသေတြမွာလဲ မုဆိုးလို႕ေခၚခံရမွာ သားသတ္သမားလို႕
ေခၚခံရမွာ ေၾကာက္ခဲ႕ၾကတာကေန ခုေတာ႕——-
ဒီလို ကိုယ္က်င္႕ျမင္႕မားတဲ႕လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကေန ကိုယ္႕က်င္႕နိမ္႕ပါးတဲ႕ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ဘာျဖစ္လို႕
သက္ဆင္းသြားရတာလဲဆိုတာ အေျဖရွာၾကည္႕သင္႕ပါတယ္ ။ အူမေတာင္႕မွ သီလေစာင္႕မယ္ ဆိုတဲ႕
အေျပာေတြကလဲ ေနရာတိုင္းမွာ ပလူပ်ံေနပါၿပီ။ ခရီးသြားတဲ႕အခါ မၾကာခဏၾကားေနရတဲ႕စကားတစ္ခြန္းက
လူေတြကိုက ေသာက္က်င္႕မေကာင္းဘူး-တဲ႕ ။ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကိုလည္း သတိရမိရဲ႕ ။ ကဗ်ာဆရာေတာ႕
ဟိုေခတ္က ေမာင္ေလးေအာင္ရဲ႕ ကဗ်ာေလးကိုလဲ သတိရမိရဲ႕ ။
ဘ၀ရပ္တည္မႈနဲ႕ကိုယ္က်င္႕တရား ။ ဤကြန္းမန္႕ေရးသူကေတာ႕ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္မေရးတတ္ပါ ။
ထင္ျမင္ခ်က္ေလးတစ္ခုေတာ႕ရွိရဲ႕ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေသြးထဲသားထဲမွာ စိမ္႕၀င္ေနခဲ႕တဲ႕
“ေလာကပါလတရား” နဲ႕ “ျဗဟၼစိုရ္တရား” ေတြက အထြက္မ်ားေနတဲ႕ ေခၽြးေတြထဲပါသြားလို႕မ်ား ေသြးထဲမွာ
ေလွ်ာ႕သြားေလသလားလို႕ ထင္မိတယ္ ။ ဒီလိုလဲ မဟုတ္တန္ေကာင္းဘူးဗ်ေနာ္ ။ အေအးခန္းထဲထိုင္ေနရလို႕
ေခၽြးသိပ္ေနသူေတြ ေလာကပါလတရားနဲ႕ ျဗဟၼစိုရ္တရားေတြ ပ်က္ျပားေနတာၾကေတာ႕ေရာဆိုရင္——–။
သႀကၤန္ကာလက ဖတ္ခဲ႕မိတဲ႕တရားေလးကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ႕ခ်င္ပါတယ္ ။
na pa ray sam vi law mar ni . na pa ray sam ka htar ka tam.
attanawwaawakkheya . ka tar niaka tar ni sa.
သူတစ္ပါးရဲ႕ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳမျပဳကို မရႈရာ၊
မိမိသာလွ်င္ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳမိသလား
မျပဳမိသလားသာ ရႈရာ၏-တဲ႕ ။
မိမိကိုယ္ကို ဗဟိုရ္ျပဳ ရႈၾကည္႕ႏိုင္ၾကၿပီး ကိုယ္႕က်င္႕ေတြျမင္႕လို႕ လူမ်ဳိးတင္႕ႏိုင္ပါေစ ။
ေက်းဇူးဗ်ာ .. တန္ဖိုးရွိတဲ႔ ကြန္႔မန္႔ ပါပဲ .. ရွည္ခ်င္သေလာက္ ရွည္ပါေစဗ်ာ .. ၾကိဳက္ပါတယ္ ..
ခ်မ္းေျမ႔ပါေစ ဗ်ာ ။